Factory paompy hafanana an-trano, mpamatsy - mpanamboatra paompy hafanana an-trano avo lenta
150L loharano hafanana hafanana rano
150l Source Source Pump Pump Heat Heater dia ny fantsom-panafanana mivantana karazana heater rano mafana miaraka amin'ny tanky 150L sy paompy hafanana 1.5HP, izay mety ho an'ny olona 2-3 hampiasa rano mafana.
200L loharano Air Heat Heat Pump
200L Source Source Pump Pump Heat Heater dia ny fantsom-panafanana mivantana karazana heater rano mafana miaraka amin'ny tanky 200L sy paompy hafanana 1.5HP, izay mety ho an'ny olona 3-4 hampiasa rano mafana.
250L loharano hafanana hafanana rano ho an'ny trano
250L Source Source Pump Pump Heat Heater dia ny fantsom-panafanana mivantana karazana heater rano mafana miaraka amin'ny tanky 250L sy paompy hafanana 1.5HP Plus izay mety amin'ny olona 4-5 hampiasa rano mafana.
400L loharano azo avy amin'ny rivotra mahamay hafanana rano
400L Air Source Heat Pump Heat Heater dia heat heater amin'ny paompy hafanana misy tank 400L sy paompy hafanana 2 HP, izay mety ho an'ny olona 6-8 hampiasa rano mafana.
500L Air Source Heat Pump hafanana
1.5Hp– Fivarotana hafanana 2Hp loharano monina
Ny vovobonin'ny herin-drivotra an'ny SolarShine dia natao ho an'ny rafitra fanamainana rano ao an-tokantrano na kely, miaraka amina singa avo lenta, manana COP avo lenta (fahombiazana) ary fiainana maharitra.
Heater amin'ny paompy hafanana rehetra ao an-trano
Amin'izao fotoana izao, ny olona dia mifantoka bebe kokoa amin'ny vidin'ny fanafanana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Na izany aza, lafo ny rafitra fanamafisana nentin-drazana toy ny herinaratra na gazy, ary tsy sariaka amin'ny tontolo iainana izy ireo.
Fitaovana paompy hafanana mivantana avy amin'ny rivotra
Ny vovonan'ny fantsona hafanana avy any SolarShine dia namboarina ho an'ny rafitra fanamainana rano ao an-tokantrano na kely, manana fitaovana avo lenta.
Fitaovana fanodinana hafanana tsy azo ivalozana
Ny heater an'ny heat pump an'ny SolarShine ho an'ny trano dia natao manokana ho an'ny rano mafana ao an-tokantrano toa ny lakozia sy ny fandroana, azon'izy ireo atao ny manafana ny rano hatramin'ny 60 ° C farafahakeliny, mitahiry vola manodidina ny 80% ho an'ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra na solika.